Muqdisho oo lagu qabtay kulan lagu taageerayey wasiirka Gaashaandhigga cusub – Radio Muqdisho
Munaasibad lagu soo dhoweynayey wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya oo ay ka qeyb-galeen siyaasiin iyo bulshada rayidka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Munaasibaddan lagu soo dhoweynayey wasiirka cusub ee wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda F. Soomaaliya, General Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini, ayaa waxaa ku sugnaa wasiirro, xildhibaanno, odayaal dhaqmeed iyo bulshada qeybaheeda kala duwan.
Horraanta munaasibadda ayaa waxaa hadallo lagu muujinayey sida ay ugu faraxsan yihiin shaqada loo igdamay wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya ka jeediyey hoggaamiyeyaasha dhaqanka iyo masuuliyiintii ka soo qeyb-galay, kulankaasi waxa ayna sheegeen in ay taageero dhinac walba la garab taagan yihiin wasiirka cusub, isla markaana ay ALLE iga baryayaan in uu la garan-galo howsha Culus ee loo dhiibay.
Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda F Somaailiya, General Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini, ayaa uga mahadceliyey bulshada Soomaaiyeed teerada ay siiyeen dhammaan golaha wasiirrada, taasoo uu ku tilmaamay in ay bilow u tahay waxqabadka Xukuumadda guud ahaan.
Shacabka Soomaaliyeed ayuu wasiirka Gaashaandhigga ugu baaqay in ay xoojiyaan taageerada ku aaddan soo nooleynta Qarannimada Soomaaliya oo buuxda.
Munaasibadda, ayaa ku dhammaatay jawi wanaagsan, iyadoo Wasiirka cusub ee Gaashaandhigga Soomaaliya uu ballan-qaaday in shacabkiisu uu u furan yahay albaabada xafiiskiisa, si uu u dhageysto tallooyinka bulshada ee muhiimka ah.